प्रधानमन्त्री वामी आउने भएपछी कस्तो छ तैयारी ? सडकहरु धमाधम ग्राभेल गरिँदै, ठुला चन्दादातालाई हेलिकप्टरबाट मन्चमा लगिने – Gulminews
Home/समाचार/प्रधानमन्त्री वामी आउने भएपछी कस्तो छ तैयारी ? सडकहरु धमाधम ग्राभेल गरिँदै, ठुला चन्दादातालाई हेलिकप्टरबाट मन्चमा लगिने
प्रधानमन्त्री वामी आउने भएपछी कस्तो छ तैयारी ? सडकहरु धमाधम ग्राभेल गरिँदै, ठुला चन्दादातालाई हेलिकप्टरबाट मन्चमा लगिने
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ फाल्गुन ५, आईतवार २०:३६ मा प्रकाशित
गुल्मी, फागुन ६ । महोत्सव सुरु हुने मिति नजिक नजिक आइरहँदा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका ७ वामीटक्सार स्थित महेन्द्र आदर्श माबिमा यतिबेला चटारो निकै बढेको छ ।
आयोजकहरु महोत्सवलाइ भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नको निम्ती खटिरहेका छन् । भौतिक व्यवस्थापनको काम देखी लिएर आर्थिक संकलन सम्मका कामहरु अगाडी बढीरहेका छन् ।
हाल सम्म करिब २ करोड ५० लाख रकम संकलन भईसकेको विद्यालयका शिक्षक तथा लेखा समितिका संयोजक डिल्लीराज खरेलले जानकारी दिए ।
मुसिकोट नगरपालिकाले विद्यालयलाइ सहयोग गर्ने ५० लाख सहित गरी उक्त रकम संकलन भएको र फरक फरक ठाँउमा आर्थिक संकलन भइरहेको उनले बताए । महोत्सबको अवसर पारी विद्यालयमा इन्जिनीयरीङ्ग सहितको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यका साथ ५ करोड अर्थ संकलन गर्ने लक्ष्य राखीएको छ ।
के के हुँदैछ तयारी?
प्रधानमन्त्रीको आगमनलाइ समेत लक्षित गरी बिद्यालयसँग जोडिएका सडकहरु ग्राभेलिङ्गको कार्य पनि सुरु भएकोछ । प्रधानमन्त्री रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा हेलिकप्टर मार्फत अवतरण गर्नुहुनेछ ।
बिद्यालयले यसरी तामझामका साथ आर्थिक संकलनको लक्ष्य सहित गर्न लागेको हीरक महोत्सब मार्फत आगामी आर्थिक बर्षदेखी बिद्यालयमा इन्जिनीयरीङ्ग सहितको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्धेश्य राखीएको छ ।
ठुला दातालाई हेलिकप्टरबाट मन्चमा ल्याईने
हेरौँ भिडियो रिपोर्ट: